I-China iphepha lebhodi yeselula yokwenziwa kwezinto kunye neFektri Lonovae
pp ibhodi yeselula yokwenza izinto
I-Thermalally laminated with one layer of honeycomb core kunye namacwecwe amabini ephepha le-PP, iphaneli yethu yobusi be-PP ilungele ukupakishwa okunokuphinda kusetyenziswe, ezemoto kunye nolwakhiwo.
Ngama-3200 - 4700 g / m2
Ubukhulu. Ubukhulu: 1860mm
Umgangatho 550, 1100mm
Ubukhulu. Ubukhulu: 1400mm
Ngwevu, mhlophe, Mnyama, Luhlaza, njl.
I-Smooth, mat, irhabaxa, ubume.
1.Ukucinezelwa okunamandla kunye nefuthe lokuchasana:
Ibhodi ye-honeycomb ibhodi ye-PP ifunxa imikhosi yangaphandle, yiyo loo nto inciphisa kakhulu umonakalo obangelwe yimpembelelo kunye nongqubano. Isetyenziswa ngokubanzi kumacandelo amaninzi anje nge-bumper yemoto kunye nezixhobo zokukhusela ezemidlalo.
Ubunzima bokukhanya kunye nokugcinwa kwezinto:
Ngokwentsebenzo egqwesileyo yoomatshini, ibhodi ye-honeycomb yebhodi ye-PP inokufikelela kwisiphumo esifanayo kunye nezinto ezingasetyenziswa kakhulu, iindleko eziphantsi kunye nobunzima bokukhanya, ukunciphisa kakhulu ubunzima bokuhambisa.
Ukusebenza kokugquma kwesandi kuphezulu:
Ukuchasana okusebenzayo kuhanjiso lwesandi kwaye ke kungasetyenziselwa izixhobo zokuthintela isandi kwizithuthi ezihamba-hambayo nakwezinye iindawo zothutho.
4. Ukusebenza kobushushu obugqwesileyo:
Ibhodi ye-honeycomb yebhodi ye-PP inentsebenzo ebalaseleyo yokugquma ubushushu, enokuthi ibambe ngokufanelekileyo usasazo lobushushu, kwaye yenza ubushushu bangaphakathi buzinze.
5. Ukuxhathisa kwamanzi kunye nokumelana okunamandla:
Ngenxa yeempawu zezinto ezisetyenzisiweyo, inokusetyenziselwa ixesha elide kwiindawo ezinomxholo wamanzi aphezulu kunye nokubola okunamandla.
6. Ukhuselo oluhlaza kunye nokusingqongileyo:
Ukonga umbane, i-100% inokuphinda isetyenziswe, i-VOC kunye ne-formaldehyde yasimahla ekusebenzeni.
Ukusetyenziswa kwebhodi yeselula
Ibhodi yePolypropylene yobusi ikwabizwa ngokuba yibhodi yeselfowuni / iphaneli / iphepha. Yenziwe ngamacwecwe amabini amancinci, aqiniswe ngokuqinileyo kumaleko obunzima bempahla yobusi kumacala omabini. Ngokwentsebenzo egqwesileyo yoomatshini, ibhodi ye-honeycomb ibhodi isetyenziswa kakhulu kwiqokobhe, isilingi, ukwahlula, umgangatho, umgangatho kunye nokuhonjiswa kwangaphakathi kwezithuthi, i-yacht, kunye noololiwe.
Egqithileyo Ishidi le-biogas yeHDPE
Okulandelayo: pp lenqatha lobusi lenjongo yee-automotives